Zimbabwe tour of South Africa 2017-18 - Live Scores | Latest News
Zimbabwe will tour South Africa for a four-day Test to be played at St George's Park in Port Elizabeth between 26th and 29th December
South Africa complete innings victory over Zimbabwe in just two days
Keshav Maharaj picked a five-wicket haul as South Africa bowled out Zimbabwe for 68 and 121 in the two innings to complete a victory by an innings and 120 runs in the inaugural four-day day-night Test match in Port Elizabeth.
Zimbabwe comeback dented by triple strike from Morkel
After South Africa declared their first innings with a score of 309 for nine, a triple strike from Morne Morkel reduced Zimbabwe to 30 for four before stumps on day one of the inaugural four-day day-night Test match in Port Elizabeth.
Senior players AB de Villiers and Dale Steyn have returned to South Africa's full-strength 14-man squad for the upcoming inaugural four-day day-night Test against Zimbabwe to be played in Port Elizabeth from 26th December.
ICC confirms playing conditions for four-day Test
The International Cricket Council has confirmed the playing conditions for the inaugural four-day Test match set to be played between South Africa and Zimbabwe later this month in Port Elizabeth.
Zimbabwe call-up Burl, Muzarabani in Test squad to face South Africa
Zimbabwe have called-up fast bowler Blessing Muzarabani and middle-order batsman Ryan Burl for the inaugural four-day day-night Boxing Day Test match in South Africa.
The International Cricket Council on Friday has approved the four-day Test to be played between South Africa and Zimbabwe in the rainbow nation later this year.